iSpyoo जासूस अनुप्रयोग विशेषताहरु
iSpyoo मोबाइल जासूस App offersawhole arsenal of powerful monitoring features. मनमनै फोन वरपर निगरानी, पाठ सन्देशहरू, जीपीएस स्थानहरु, कल विवरण, फोटो, सामाजिक मिडिया गतिविधि and more. This page will take you throughalist of our innovative features and this is where you can learn all about how each feature can work for you. Scroll through the page to learn more about all that iSpyoo प्रस्ताव छ. तपाईं एक ठूलो प्याकेज मा यी सबै महान विशेषताहरु आनन्द उठाउन सक्छौं.
ठेगाना पुस्तक भण्डारण गरिएका सबै नाम र संख्या हेर्नुहोस्.
अन्य विवरणहरू हेर्नुहोस्, ठेगाना जस्तै, इमेलहरू, व्यावसायिक स्थान, आदि.
एक अभिभावक रूपमा तपाईं जो आफ्नो बच्चा उनको मोबाइल फोन संग सम्पर्क छ बारे चिन्ता छ. सायद तपाईं आफ्नो बच्चा सम्पर्क गर्न चाहँदैनन् अर्को बच्चा थाह. या तपाईं एक आगन्तुक छ जो त्यो सम्पर्क छ कसैले त्यहाँ हुन सक्छ. You need to know who your child is contacting in order to protect them. iSpyoo records all contacts that are saved on the mobile phone.
फोन पुस्तक भण्डारण सबै संख्या र नाम हेर.
लक्षित फोन को फोनबुकको प्रविष्टि माध्यम जानुहोस्.
All phonebook entries are uploaded to your online iSpyoo तपाईं इन्टरनेट जडान संग कहीं देखि उपयोग गर्न सक्छन् जो नियन्त्रण प्यानल
ठेगाना जस्ता बचत भएको छ कि अन्य सम्पर्क विवरण हेर्नुहोस्, ईमेल आईडी र जन्मदिन.
iSpyoo allows you to look at all the phone book entries of the target phone. संग iSpyoo, तिमी सक्छौ
फोन आफैलाई माध्यम जा बिना कार्य लग भित्र सबै प्रविष्टि हेर्नुहोस्.
निर्धारित कुनै पनि सभामा वा पेन्डिङ कार्य हेर.
हरेक प्रविष्टि लागि जानकारी विवरण पहुँच, लगायत प्राथमिकता, कारण मिति, र कुनै पनि टिप्पणीहरू जोडी.
सबै कार्य लग जानकारी आफ्नो अनलाइन मा अपलोड छ iSpyoo तपाईं कुनै पनि समयमा मा प्रवेश गरेर उपयोग गर्न सक्छन् कि नियन्त्रण प्यानल, कहीं एक इन्टरनेट जडान संग देखि.
iSpyoo lets you access all the entries in Task Log made on the target’s Smart Phone. संग iSpyoo spy app for smart phones task log, तिमी सक्छौ
iSpyoo lets you Spy Viber, जासूस फेसबुक मेसेन्जर, जासूस iMessage, जासूस स्काइप, Spy WhatsApp that are sent and received through the target phone. संग iSpyoo तिमी सक्छौ:
Viber मार्फत गरे मुक्त कलहरूको विवरण हेर्नुहोस्.
पठाइयो र प्राप्त पदहरू र फोटो मोनिटर.
हेर्नुहोस् सत्र लग समूह-सन्देश.
कुनै पनि इन्टरनेट सक्षम पीसी देखि यस डाटा पहुँच.
पढ्नुहोस् च्याट सन्देशहरू अन्य फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु संग exchanged
आफ्नो कन्ट्रोल प्यानल देखि यो जानकारी पहुँच.
सबै iMessage कुराकानी हेर्नुहोस्.
यो iMessage कुराकानी मा आईएम नाम र मान्छे को संख्या मा हेर.
प्रत्येक च्याट भयो जब प्राप्त समय र मिति टिकटहरु थाह.
कुनै पनि फोटो पहुँच प्राप्त, लक्षित फोनमा iMessages माध्यम पठाए र मुक्ति भिडियो वा अडियो फाइल.
सबै iMessage ट्रयाक जानकारी आफ्नो अनलाइन अपलोड छ iSpyoo control panel which you can be accessed from anywhere with an internet connection, कुनै पनि समयमा.
सबै स्काइप च्याट संवाद हेर्नुहोस्.
पूर्ण स्काइप कल लग हेर्नुहोस्.
तिनीहरूले संग चैट र कल गरिएको छ मान्छे को नाम र संख्या पत्ता.
प्रत्येक च्याट वा कल भयो जब प्राप्त समय र मिति टिकटहरु थाह.
कुनै पनि फोटो पहुँच प्राप्त, भिडियो वा अडियो फाइलहरू लक्षित फोनमा स्काइप मार्फत पठाइएको र मुक्ति.
सबै स्काइप च्याट संवाद र कल लग आफ्नो अनलाइन अपलोड छन् iSpyoo तपाईं इन्टरनेट जडान संग कहीं देखि उपयोग गर्न सक्छन् जो नियन्त्रण प्यानल.
सबै WhatsApp कुराकानी ट्र्याक.
आफ्नो कन्ट्रोल प्यानल देखि सीधा जानकारी पहुँच.
भ्रमण गरिएको छ प्रत्येक यूआरएल हेर्नुहोस्.
लक्षित प्रयोगकर्ता भ्रमण छ वेबसाइटहरु मार्फत हेर.
सबै भ्रमण वेबसाइट URLs आफ्नो अनलाइन अपलोड छन् iSpyoo तपाईं इन्टरनेट जडान संग कहीं देखि उपयोग गर्न सक्छन् जो नियन्त्रण प्यानल.
तपाईं प्रत्येक वेबसाइट भ्रमण थियो जब थाहा सक्छन् त समय र मिति टिकटहरु प्राप्त.
लक्षित प्रयोगकर्ता प्रत्येक वेबसाइटको भ्रमण पटक संख्या पत्ता.
चिन्हित् थिए जो वेबसाइटहरु हेर्नुहोस्.
प्रत्येक मनपर्ने वेबसाइट पहुँच थियो जब हेर्नुहोस्.
आफ्नो कन्ट्रोल प्यानल देखि सीधा यो जानकारी विश्लेषण.
तपाईंको कर्मचारीहरु पठाउन र इमेलहरू प्राप्त गर्न कम्पनी सेल फोन प्रयोग. तिनीहरूले पनि सेल फोन व्यक्तिगत इमेलहरू पठाउन र प्राप्त गर्दै? के प्रतियोगिहरु गर्न कम्पनी रहस्य पठाउने बारे? तिमीलाईँ चाहिन्छ iSpyoo to keep tabs on your employees’ मोबाइल फोन ईमेल गतिविधि. तपाईंको बच्चा सामाजिक मिडिया वेबसाइटहरु मा खाता सेट अप गर्न सेल फोन ईमेल अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. सायद तपाईं बारेमा थाहा छैन कि खाता सेट अप गर्न आफ्नो बच्चा चाहँदैनन्. iSpyoo will help you learn the truth about what emails they are sending and receiving.
iSpyoo lets you view all emails that are sent or received through the target phone. संग iSpyoo तिमी सक्छौ:
सबै इमेल आफ्नो अनलाइन अपलोड छन् iSpyoo तपाईं इन्टरनेट जडान संग कहीं देखि उपयोग गर्न सक्छन् जो नियन्त्रण प्यानल.
इ-मेल हेर लोकप्रिय ईमेल आवेदन माध्यम exchanged.
लक्षित फोनमा सबै आगमन र बहिर्गमन इमेलहरू पढ्नुहोस्.
प्रत्येक ईमेल को सामग्री पढ्नुहोस्.
सबै प्रेषकहरुको र प्रापकको इमेल ठेगाना विवरण प्राप्त.
प्रत्येक ईमेल पठाएको थियो पत्ता लगाउन समय र मिति टिकटहरु हेर.
वातावरण को बग कुनै पनि प्रकार.
रेकर्डिङ समय सेट अप.
यो bugging प्रबन्ध र आफ्नो कन्ट्रोल प्यानल मार्फत रेकर्डिङ पहुँच.
क्रम मा आफ्नो बच्चाको गतिविधि एक पनि अधिक मा-गहिराई ज्ञान प्राप्त गर्न, फोनको सेरोफेरो को गोप्य अडियो क्लिप लाइव कन्ट्रोल प्यानल देखि रेकर्ड गर्न सकिन्छ. तपाईं तपाईं आदेश पठाउन अघि अडियो क्लिप हुन चाहनुहुन्छ कि मिनेट को संख्या निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं तैयार हो जब तपाईं खेल्न लागि त्यसपछि रेकर्डिङहरू चाँडै प्यानल अपलोड छन्. तिनीहरूले दूर गर्दै आफ्नो बच्चाको वरपर सुनेर तपाईं सुरक्षित तिनीहरूलाई राख्न मदत गर्नेछ. उहाँले हात बाहिर रही छ भने तपाईं सुन्न हुनेछ, चाहिएको बेला र कदम चाल्ने प्रमाण छ.
लक्ष्य फोन तपाईंलाई सुनेर छन् भनेर थाह छैन.
लक्षित फोन गर्न एक सरल एसएमएस आदेश पठाउन वा अनलाइन प्रयोग iSpyoo remote control to activate the Live Call Intercept feature.
कुनै पनि चलिरहेको कल गर्न मा सुन्न वा लक्ष्य फोनबाट बनाइए.
सक्रियता पछि, तपाईं कुनै पनि फोन प्रयोग कलहरू गर्न सुन्न सक्छौं. तपाईं बस लक्ष्य फोन नम्बर एक कल डायल गर्न आवश्यक र तपाईं जडित हुन छौँ.
तत्काल सबै आगमन वा बहिर्गमन कलहरू एक रेकर्डिङ देख्न.
तपाईं वा देखि कल रेकर्ड गर्न इच्छा एक पूर्वनिर्धारित नम्बर सेट अप.
कति समय आफ्नो मोबाइल फोन आफ्नो बच्चा वा कर्मचारी खर्च बनाउने फोन कलहरू गर्छ? तिनीहरू कल र जब छन्? संग iSpyoo Smartphone Monitoring Software you can monitor their phone call information. तिनीहरूले कल गर्ने पत्ता, जब तिनीहरूले कल, र कति समय तिनीहरूले प्रत्येक कल मा खर्च.
तपाईं लक्ष्य फोनको सम्पर्क सूचीमा कुनै पनि नम्बर सहित तपाईं चाहनुहुन्छ कुनै पनि फोन नम्बर एक सन्देश पठाउन सक्छौं.
बस एक एसएमएस सन्देश मा टाइप आफ्नो iSpyoo control panel and send an SMS to any number through the target phone.
प्राप्तकर्ता एसएमएस लक्षित फोनबाट प्राप्त भएको छ भन्ने सोच्छन् गर्नेछौं त्यसैले एसएमएस सन्देश लक्षित फोन मार्फत जानेछु.
प्रत्येक पाठ सन्देश सामाग्री
पाठ सन्देश आगमन वा बहिर्गमन थियो कि
पाठ सन्देश प्रेषक / प्राप्तकर्ता
मिति र पाठ सन्देश समय
तपाईंको कन्ट्रोल प्यानल देखि सीधा यस जानकारी पहुँच.
तत्काल एक व्यापक नक्सामा हालको whereabouts देख्न.
समय को एक निर्दिष्ट अवधि भित्र विस्तृत मार्ग इतिहास जाँच.
जीपीएस उपलब्ध छैन पनि जब स्थान पहिचान.
आफ्नो कम्पनी खेतमा आफ्नो कर्मचारीहरु गर्न मोबाइल फोन प्रदान मानौं. तिनीहरूले खटाइएको गन्तव्यहरू गर्न यात्रा गर्दै छन् भने तपाईं कसरी थाह? वा तपाईं अनुमोदन तर सट्टा तपाईं जान छैन तिनीहरूलाई भन्नुभयो कहीं जान्छ कि एक साथीको घरमा भेट्न छन् आफ्नो बच्चा तपाईं बताउँछ कल्पना. संग iSpyoo Smartphone Monitoring Software you will know exactly where your employees or children are when they are away.
जीपीएस postions तपाईं एक नक्शा लिंक संग चयन एक समय अन्तराल मा अपलोड.
किशोरीहरूको सुन्दर र आफ्नो साथीहरूको द्वारा स्वीकार हुन चाहनुहुन्छ र अत्यधिक आज फैशन र सुन्दरता उद्योग प्रभावित छन्. यो यो तिनीहरूले ड्रेस तरिका र काम गर्न आउँदा तिनीहरूले खाम धक्का गर्न कहिल्यै भन्दा बढी दबाब छन् देखिन्छ. स्मार्टफोन अब फोटो सम्झौता लिन र यस्तो फेसबुक रूपमा साइटहरु तिनीहरूलाई पोस्ट तिनीहरूलाई मौका दिन, ट्विटर र माइस्पेस. तिनीहरू बस मजा र एक निजी तरिकामा कसैले impressing छन् जस्तो लाग्छ, तर वास्तविकता मा फोटो तिनीहरूलाई विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ र पोस्ट फोटो यी प्रकार खोज्न भनेर बाहिर त्यहाँ केटा हेरिसकेकी छ्यौ मानिसहरूलाई धेरै छन्. प्रयोग iSpyoo to learn the truth about what photos and videos are being taken with your child’s cell phone.
एक स्लाइड रूपमा वा माध्यम थम्बनेल रूपमा फोटो हेर्नुहोस् iSpyoo control panel.
आफ्नो कम्प्युटरमा फोटो डाउनलोड.
लक्षित फोनमा भण्डारण गरिएका सबै फोटो हेर्नुहोस्.
फोटो लिएका वा डाउनलोड गर्दा हेर्न समय र मिति टिकटहरु हेर.
सबै तस्बिरहरू आफ्नो अनलाइन अपलोड छन् iSpyoo तपाईं इन्टरनेट जडान संग कहीं देखि उपयोग गर्न सक्छन् जो नियन्त्रण प्यानल.
लक्षित उपकरणमा डाउनलोड सबै भिडियो हेर्नुहोस्.
तिनीहरूले लगियो जब हेर्नुहोस्.